Samsung Galaxy M21 na F41: nata mmelite nke Otu UI Core 3.0 | Gam akporosis
Mgbe launching na Otu UI Core 3.0 software melite na gam akporo 11 maka Galaxy M31, ugbu a Samsung na-enye mmelite a na Galaxy M21 na Galaxy F41.
Abụọ abụọ ahụ na-anabata gị na OTA ọhụrụ na-agbakwunye ọtụtụ mgbanwe na ndozi. Nke a ji nke nta nke nta na-achụsasị, yabụ ọ ga - ekwe omume na ọ bụghị nkeji niile nke ekwentị ndị a enwetala ya ugbu a, yabụ enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ọ bụ maka gị. E kwere nkwalite ahụ na ụwa niile.
Otu UI Core 3.0 na gam akporo 11 na-abịa Samsung Galaxy M21 na Galaxy F41 site na mmelite ohuru
Otu UI Core na ụdị ọ bụla bụ ụdị dị mfe nke Samsung's One UI. A na-enye nke a maka obere mobiles dị ala na nke etiti, ebe a raara nke abụọ nye ndị njedebe dị elu dị ka Galaxy Note na S usoro nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ya mere Galaxy M21 na Galaxy F41 na-enweta ụdị mmelite a.
Ekwentị ndị a na-enweta ugbu a melite naanị India. O sina dị, OTA ga-ekesa na Europe na ụwa ndị ọzọ.
Okwesiri ighota na na Brazil a maara Galaxy F41 dị ka Galaxy M21s, ya mere ụdị a ga-abụkwa onye mmeri nke One UI Core 3.0 n'okpuru gam akporo 11.
Mmelite maka ngwaọrụ ndị a na-abịa na nọmba ntinye ngwa ngwa M215FXXU2BUAC na F415FXXU1BUAC, n'otu n'otu. Na mgbakwunye na iweta atụmatụ ọhụrụ, mmelite kachasị ọhụrụ na - emekwa ka ọkwa nke nche nche ruo Jenụwarị 2021, dị ka ụzọ ahụ si kọwaa. Gizmochina.
Na nke a, anyị na-eche maka mwepụta nke OTA kwuru maka ụdị ndị ọzọ nke Galaxy M na Galaxy F. Anyị ga-enwetakwu ozi banyere ya na ụbọchị ndị na-abịanụ,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy M21 na Galaxy F41 na-enweta mmelite nke Otu UI Core 3.0 na gam akporo 11